Mbola tantara hafa koa no nampisara-dalana ahy sy Andry Rajoelina, izay zaho no anisany akaiky azy indrindra sy namolavola ny vinany rehetra. Raha misy ny mahafantatra azy dia anisany aho. Ary natokisany. Fa rehefa tsy mitovy ny fomba fijery dia nifanaja samy naka ny lalany. Ary tsy miady fa mifanaja. Miresaka matetika hatramin'izao, fa mbola tsy mitovy fomba fijery dia samy mandeha amin'ny lalany.
Fa ny filazana fa Andry Rajoelina no niketrika ny famonoana ireo olona ireo kosa dia tafahoatra.
Momba an'i Mamy Rakotoarivelo manokana dia fantatro izy, satria efa niara-niasa tamiko tao amin'ny Cabram Expert comptable. Izy Auditeur tao, zaho attaché de direction générale.
Ananako ny rapport d'autopsie nahafaty azy ary in-dimy efa namono tena izy.
Ka ny filazana fa Andry Rajoelina no nampamono azy dia diso.
Momba an'i Dr Robinson dia mbola eo izy hanazava, fa tsy marina koa ilay resaka, efa saika nandresy izy fa nanao erreur tamin'ilay débat farany tao amin'ny Carlton hoe endasina ny foza. Dia i Rossy no nivoy hoe andao resahina tsy ankihato hoe isika foza endasin'i Ravalomanana.
Coup de com no naharesy an'i Robinson, fa misy erreur hafa koa.
Izaho anisany nandresy lahatra an'i Robinson hanaiky ny vokam-pifidianana, mbola tsaroako ny antso farany nataoko tamin'ny radio maraina niantso azy ho eny Mahamasina, tohin'ny resakay.
Toy ny nataonay sy Serge Zafimahova sy ny ekipa K25, nandresy lahatra an'i Filoha Ravalomanana hanaiky ny vokam-pifidianana na dia hitanay aza fa feno hala-bato tao.
Tsy voavidim-bola izany ny Filoha Ravalomanana fa diso ny filazana izany. Nisy ny nanantona azy hanome vola fa tsy noraisiny izany. Maro ny fifanekena natao fa nisy nivadika indray taty aoriana. Tantara hafa koa iny.
Misy ny tsy ekeko ny ataon'i Andry Rajoelina, fa ny marina kosa aza disoana.
Aoka ampakarina ny ady hevitra fa ambany loatra ilay fanaratsiana olona.
Izy no mitondra, aoka ampiana izy, tsikeraina izay tsy mety, omena soso-kevitra. Tsy fotoana anonganam-panjakana intsony izao na anaovana ady saritaka.
Ny mpitondra koa mila mahay mihaino. Nampindramina anareo ny fahefana fa tsy hoe ianareo no tompom-pahefana.
Tsy volanareo ka hoe ianareo no manome, dia ny vahoaka mpangataka, mila mazava, ahoana no ampiasainareo ny vola. Taiza no nividianana ireo fitaovana ? Nisy fiaraha-miasa tamin'ny vahiny ve ? Raha eny ? Inona no tambiny ? Nisy appel d'offre ve ?
Izaho manokana, izay hitako fa mety dia deraiko, izay tsy mety dia teneniko, izay diso kosa dia ahitsiko.
Anisan'ny deraiko ny famatsiana fitaovana ny Foloalindahy, ny fahasalamana, fanaovana ireny fotodrafitrasa sy lalana ireny. Ny tetikasa fihariana na misy tokony hatsaraina aza. Ny fanamboarana Tanàna vaovao...
Mila manana honnêteté kosa ny mpitondra, omeo hasina ny asa nataon'ny teo aloha, continuité de l'Etat. Asan'ny teo aloha ary tohizan'ny manaraka, fomban-javatra izany.
Ohatra : lalan'Antananarivo, autoroute Toamasina, Ambilobe-Vohemar, aéroport Ivato, gare routière, barrages hydroélectriques maromaro ireo, barrage fambolem-bary, rano any atsimo...
Mila ezaka be kosa ny fampianarana, ny famoronana asa, izay io no fototry ny tsy fandriam-pahalemana. Mila mazava ny diplomasia fa tsy io misarangotra etsy sy eroa mitady mpamatsy vola io fotsiny.
Mila ezaka be ny angovo, ny rano fisotro, ny fahasalamana, ny fambolena sy fihompiana, ny jono, ny harena ambanin'ny tany, ny fiarovana ny tontolo iainana nefa tokony ho trandrahana koa ny ala izay azo volena sy avaozina.
Mila aloa sy akarina ny tambi-karaman'ireo ECD sy FRAM. Ireo dia tena miasa nefa atao zanaky kalo hafa. Mbola misy paramed bénévole, tsy rariny.
Farany, ny fametrahana ambony ny mpandrahara malagasy, ny fifehezana ny hetra sy ny vola.
Tsy mety io port Toamasina gaboraraka io ka misy conteneur amam-polony isan'andro ho entin'ny lamasinina tsy misy fisavana.